Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » Second hand Computer ကို ဘယ်လို ၀ယ်မလဲ .. [Article]
My computer ကို r click ထောက် ပြီးရင်တော့ properties ကနေပြီးတော့ အဲဒီ့မယ် processor က ဘာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်နိုင်ပါတယ် ...
အဲဒါ ကတော့ အလွယ် နည်းကလေး ပါ ... အဲဒါ ကြီးကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း မယုံလိုက်နဲ့ဦးနော် ... ပြင်ထားတာတွေ နဲ့ ညားနေဦးမယ် ။။။
အဲဒီ့ အပေါ်ကနေရာမှာ တကယ်လို့ ညာထားတယ် ဆိုရင် ပြန်ဖြေလို့ ရမယ့် နည်းကလေးတွေ ရှိပါတယ် .... အဲဒီ့မယ် ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ ...ဒါကတော့ processor ကိုကြည့်တာပါ ...
memory ram ကလည်း အဲဒီ့ နေရာ ကလေးမှာပဲ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ....
ပြီးတော့ သူ့ သုံးထားတဲံ HDD က ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာကလေးကို ပါ ကြည့် ကြည့် ပါဦး .. ဒါကတော့ သိပ်တော့ အရေး တော့ မကြီးပါဘူး .. ကိုယ် က
အများ ကြီး ထည့် မယ်ဆိုရင်သာ ပေါ့ ဗျာ
My computer - r click ပြီးရင် manage ကို ၀င်လိုက်ပါ .... အဲဒီ့မယ် computer management ဆိုတဲ့ box ကလေး ကျလာပါ့မယ် ..အဲဒီ့ ကနေမှ
disk management ဆိုတာကနေပြီးတော့ hard disk ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး ဗျာ ။။
VGA တွေ ဘာတွေ ကတော့ start - run - cmd ဆိုသွားပြီးတော့ systeminfo မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ...
ပြီးရင် အဲဒီ့ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ အပြင်မှာ အသစ်ဆင်ရင် ဘယ်လောက်ကျမယ် ဆိုတာတွေဘာတွေ ချိန်ကိုက် ကြည့်ပေါ့ဗျာ ။။။ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားတာ တွေ က သိပ်ပြီးတော့ မစုံလင်သေးပါဘူး ... ဖိုရမ်ထဲမှာ ဆရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ။။ ထပ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေး ပေးကြပါဦးဗျာ ... အမှား ကလေးတွေ ပါခဲ့ ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါ .. ပြီးတော့ ပြင်ပေး သွားကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ် .... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
use code kohtet